Tirada Kiisaska Cudurka Koronafayras ee Afrika Ayaa Kor u Dhaaftay 380 Kun - Tilmaan Media
Tirada Kiisaska Cudurka Koronafayras ee Afrika Ayaa Kor u Dhaaftay 380 Kun
in CAAFIMAAD, CAALAMKA
Cudurka Koronafayras oo dunida ku habsaday laga billaabo dhammaadkii sanadkii 2019 ayaa waxa uu aad u saameeyay qaaradaha dunida oo idil. Maalinnimadan Isniinta ah ayaa waxaa tirada dadka guud ee laga helay cudurka ee qaaradda Afrika waxa ay kor u dhaaftay 380 kun, sida laga soo xigtay Xarunta Kontoroolka iyo Ka Hortagga Cudurrada.
Ugu yaraan 9,657 qof ayaa u dhintey fayraska, halka 182,569 bukaan ay soo kabsadeen ilaa hadda, sida ay muujiyeen tirakoobyadii ugu dambeeyay. Keliya Koonfurta Afrika ayaa waxa uu diiwaan geliyay 143,600 kiis, Waqooyiga Afrika 96,400, Galbeedka Afrika 73,900, Bariga 35,800 halka uu Bartamaha Afrika 33,100 kiis laga helay.
Waqooyiga Afrika waxaa laga hayaa 4,100 dhimasho, Koonfurta Afrika 2,500, Galbeedka Afrika 1,300, Bariga Afrika 100, halka Bartamaha Afrika ilaa hadda ay cudurka u dhinteen 716 qof. Ugu yaraan 71,300 oo bukaan ah ayaa ka soo kabsaday Koonfurta Afrika, 40,400 Galbeedka Afrika, 38,100 Waqooyiga Afrika, 16,500 Bariga Afrika iyo 16,200 oo ku nool Bartamaha Afrika.
Isha Warka: Anadolu Agency
Baarlamanka Puntland oo war kasoo saaray arrimaha doorashooyinka dalka
Kanada ayaa Xakamayn Doonta Xudduudda ay la Leedahay Maraykanka